अन्तराष्ट्रिय Archives - Page2of 207 - Sawal Nepal
भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का संक्रमितहरुको निको हुने दर बढेको जानकारी दिएको छ । सो मन्त्रालयले भारतमा कोरोना संक्रमणबाट संक्रमितहरुको निको हुने दर बढेर ६१.५३ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिएको जनाइएको छ । यहाँ गएको २४ घन्टामा मात्र २२ हजार जनाभन्दा बढी संक्रमित भेटिएका बुधबार बिहान प्राप्त भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
मेलबर्नमा पुनः लकडाउन, ५० लाखलाई घरबाट बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध
अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा दोस्रो ठूलो शहर मेलबर्नमा कोरोना संक्रमणको वृद्धिका कारण दोस्रो पटक लकडाउन लागू गरिएको छ । नयाँ आदेश अनुसार करिब ५० लाख मेलबर्नबासीलाई आफ्नो घरबाट बाहिर निस्कने अनुमती छैन । यद्यपि, अत्यावश्यक सेवाका लागि घरबाट बाहिर निस्कन भने दिइनेछ । स्थानीय प्रहरीका अनुसार शहरको चारैतिर घेराबन्दी गरिएको छ जसमा थुप्रै चेकपोइन्ट बनाइएका छन् ।
वासिङ्टन । शरीर जोडिएर जन्मिएका संसारकै बढी उमेरका दाजुभाई (जुम्ल्याहा) रोनी र डोनी ग्लेयानको निधन भएको छ । उनीहरुको ६८ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । उनीहरुले डेटनको एक अस्पतालमा प्राण त्यागेका छन् । उनीहरुका भाई जिमले निधनको खबरको पुष्टि गरेका छन् । उनीहरुको अन्य कुनै रोगले नभई प्राकृतिक मृत्यु भएको जनाइएको छ । यी
कोरोनाभाइरसको बढ्दो संक्रमणका कारण अष्ट्रेलियाको दुई ठूलो जनसंख्या भएको राज्यबीच व्यस्त सीमा बन्द गर्नका लागि सयौं प्रहरी अधिकारी तथा सेनाको जवान तैनाथ गरिएको छ । न्यू साउथ वेल्स र भिक्टोरियाबीच सय किलोमिटरभन्दा लामो सीमालाई मंगलबार राती ११ बजेर ५९ मिनेटमा बन्द गरिनेछ । पछिललो सय वर्षमा पहिलो पटक यी दुई राज्यको सीमा बन्द गरिनेछ ।
गयो ६.३ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प
जकार्ता – भूकम्पीय उच्च जोखिममा रहेको इन्डोनेसियाको सेमाराङमा ६.३ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प गएको छ । इन्डोनेसियाली अधिकारीहरुले उक्त स्थानमा कुनै क्षति भए नभएको बारेमा विवरणहरु संकलन गर्ने कार्य शुरु भएको बताएका छन् । सोमबार नै ताजिकिस्तानमा पनि ४ म्याग्नीच्यूडको भूकम्प गएको त्यहाँ राष्ट्रिय भूगर्भ केन्द्रले जनाएको छ । साथै, अफगानिस्तानको राजधानी काबुलबाट करिब ३० किलोमिटर दक्षिणपश्चिम
काठमाडौं। ब्राजिलमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्या १६ लाख नाघेको छ। यहाँ गएको २४ घन्टायता मात्र २६ हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। २४ घण्टामा यहाँ ६०२ जनाको ज्यान गएको बताइएको छ। ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको समाचारअनुसार यहाँ मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या ६४ हजार ८६७ जना पुगेको छ। दुई दिनअघि मात्र ब्राजिलले ३८ हजारजना नयाँ संक्रमित थपिएको
अमेरिकाका समस्याहरू अमेरिका दुनियाँकै एउटा भव्य मुलुक हो । यसमा शङ्का छैन । तर हामीमध्ये धेरैले सोच्ने गरेजस्तो स्वर्गै हो त अमेरिका ? के अमेरिका यस्तो मुलुक हो जसलाई हेरेर हामीले आफ्नो देशप्रति हीनताबोध गर्नुपर्छ ? यदि अमेरिका स्वर्ग होइन भने के कारणले होइन ? हो भने अमेरिकी समाजमा समस्या छैनन् त ? पक्कै त्यहाँ
भारतमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या आइतबार रुसभन्दा धेरै भएको छ । भारतमा संक्रमितको संख्या ६ लाख ९५ हजार ३ सय ९६ रहेको छ भने रुसमा ६ लाख ८१ हजार २ सय ५१ संक्रमित छन् । यसका साथै भारत संसारको तेस्रो सबैभन्दा संक्रमित देश बनेको छ । पछिल्लो १० दिनमा भारतमा संक्रमितको संख्या अत्यधिक बढेको छ ।
एजेन्सी । कोरोनाभाइरसका कारण भारतमा एकैदिनमा झण्डै २५ हजार जना सङ्क्रमित भएका छन् । सरकारी स्वास्थ्य अधिकारीहरुले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा २४ हजार ८५० जना सङ्क्रमित भएका छन् । दैनिक रुपमा सङ्क्रमित हुनेहरुको यो सङ्ख्या अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरै भएको पनि अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले आइतबार
भारतमा एकै दिन २४ हजारमा कोरोना संक्रमण, ६१० जनाको मृत्यु
काठमाडौं, २१ असार । छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोना संक्रमण दिनहुँ भयावह रुपमा बढिरहेको छ । हिजो (शनिबार) भारत कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने देशको तेस्रो स्थानमा पुगेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो २४ घण्टामा भारतमा ६१० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गएको २४ घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट सबैभन्दा धेरै ब्राजिलमा एक हजार १११